Yekupedzisira Nzeve BOOM 3, iyo-yevhu-mutauri mutauri uye ese mhando | Gadget nhau
Isu tanga tatova nemufaro wekuongorora izvo zvinowanzoitika chigadzirwa kubva kuEkupedzisira Nzeve, iyo Logitech dunhu rinotungamira yemhando yepamusoro isina waya odhiyo. Muenzaniso ndeye Wonderboom renji, idiki diki seti ye Ultra-rugged masipika tanga tine iyi ongororo.
Ino nguva isu tinawo mukuru wehama, iyo Yekupedzisira Nzeve BOOM 3 mumaoko edu kuti tione izvo yazvino vhezheni yeimwe yemireza yavo inotipa. Gara nesu uye uwane iyo Yekupedzisira Nzeve BOOM 3, mutauri asingagadzirike anofamba uye anopa ruzha rune simba zvechokwadi, Zvakakosha chaizvo here?
Senguva dzose isu tichaongorora yega yega ruzivo rwechigadzirwa kuti iwe ugone kuyera kutenga kwakoMukutaura kwakadai tinofanirwa kutarisa kuvaka, kubatanidza, kuenderana uyezve mhando yeinzwi rayo. Zviri pachena kuti uyu haazi chero mutauri, uye chero munhu akaedza iyo Yekupedzisira Ears BOOM renji anochiziva kwazvo, saka gara nesu uye uone kana zvichikosha kubhadhara iyo 118,15 euros iyo inodhura mune ino Amazon chinongedzo. Pasina imwezve ado, ngatiendei iine yakadzika kuongorora.
1 Yakasimba, yakakura, asi yakanyanya kutsvinda
2 Hardware uye yekubatanidza maficha
3 Iyo Bhatani Bhatani uye chiteshi chechaji
Yakasimba, yakakura, asi yakanyanya kutsvinda
Iyo yapfuura modhi yaive yakanyanya kuramba, hombe uye ine simba, zvisinei, kune vazhinji vedu zvaive zvakaoma kuenzanisa dhizaini yacho mumarudzi ese ezvinhu, zvainyadzisa kuti yakapwanya aesthetics yekamuri nekuda kwerubhu rwayo rukuru kufukidza kunyangwe neruzha rwakanakisa rwawakaunza uye kuzvitonga kuzere kwainako. Kunyange zvakadaro, Ekupedzisira Nzeve dzakasarudza kuita chimwe chinhu pakati pekupokana uye dhizainiIno nguva, kubheja pazvinhu zvakafanana, asi uchivaroora nenzira yekuti kubheja pane zvakapusa vanopa mhedzisiro imwechete pasina kukwezva kutarisisa kwakanyanya. Unogona kutenga chinyorwa ichi nemavara matanhatu: Bhuruu, dema, pepuru, tsvuku, pink uye girini yakasviba.
Size: 73mm dhayamita x 184mm kukwirira
Weight: 608 gramu
Kuramba: IP67 inoiswa pasi kwemaminitsi makumi matatu
Micheka miviri-iridescent jira
Tine a nylon kupfeka zvese pachigadzirwa, nepo kumberi mutauri anotungamira pamusoro payo maviri maitiro (uye hofori) mavhoriyumu mabhatani. Kumashure isu tine yenyungidzi yenyuchi chiuno chinosungirira kuisungirira nekutakura, pamwe chete nechikamu chepazasi chevhavha isina mvura inoviga mudiki microUSB chiteshi chekuchaja (rova pekutanga pachiuno nekusabheja paUSB-C). Pamusoro tine mabhatani matatu: On off; Zvemashiripiti Bhatani neBluetooth pairing, iyo femu yakagara ichibheja pane yakapusa mabhatani ayo uye yakazviita zvakare. Ehezve, hachisi chinhu chidiki, asi chinowira mukati memafungiro, chingave chinonyanya kushamisa ihuremu hwayo, inopfuura hafu yekirogiramu yechigadzirwa chine 360º odhiyo ine simba rakakwirira. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mupakeji tinowana zvese zviri zviviri rairo uye tambo yekuchaja, asi kwete iyo magetsi magetsi.
Hardware uye yekubatanidza maficha
Kubatana kwakasarudzika, isu hatina chero mhando yeAUX yekupinza nekuti inogona kukanganisa kutendeka kwechigadzirwa, asi kutaura chokwadi ... zvaizodai zvakadhura kuisanganisira? Iva sezvazvingaite isu tinogona kungova chete MAKARALI USB 4.2 seye chete sisitimu yekutumira iwe kurira. Isu tine chepamutemo chikumbiro icho chichatibvumidza isu kuti tibatanidze kusvika masere zvigadzirwa kuburikidza nazvo, tichiumba yakarongedzwa multiroom sisitimu iyo inogadzira network kusvika pamamita makumi mana nemashanu munzvimbo, isu takaedza mhando nemamwe madhijitari eiyo mhando uye inoshanda nenzira yakapusa, pasina kuunza matambudziko muodhiyo kana mukubatana, shamwari dzinoverengeka uye muunganidzwa weBoOM renji vanogona kukanda pati yakanaka inopera. kumusoro kunotsamwisa vavakidzani, saka unofanirwa kuzvidzora zvishoma. Tichireva kuzvitonga tichava nemaawa anosvika gumi nemashanu pamavhoriyamu epakati, ayo isu takakwanisa kusvika kusvika kumaawa gumi nemaviri pazvikamu zvepamusoro Nemubhadharo mumwe chete, ehe, kubhadharisa kuzere kunozotitorera angangoita maawa maviri.
Isu tine huwandu hwepamusoro hwezwi 90 dBA mune frequency yakawanda ye90 Hz - 20 kHz nekutenda kuvadudziri vayo vashanu-masendimita uye ayo ma5 x 5-masendimita maredhiyo ekuwedzera kuti asimbise mabass, asi idzi dzose nhamba… handiti? Iyo BOOM 10 inonzwika yakasimba, muchokwadi tinogona kutaura kuti inonzwika yakasimba kwazvo, inopfuura zvakakwana kutora imba yakazara kana hofisi. Uye zvakare, isu tanga tichiedza kuburikidza nemhando dzakasiyana dzeSpotify nevamwe vanopa uye chokwadi ndechekuti BOOM 3 haina kunge iine matambudziko ekuita kana kukanganisa kurira pazwi rakakwira.Iwo mabass akanaka kwazvo uye iyi Yekupedzisira Nzeve inoita zvinoshamisa zvese mumimhanzi yekutengesa uye kana tikachinjira kune zvishoma Rock & Roll kana flamenco, handikwanise kuvanza kuti ichi chiratidzo chinopa kubva kune yangu yakaderera maonero ekuona akanakisa ane ruguerized isina waya mutauri Kubva musika. Hatimbofaniri kukanganwa izvozvo BOOM 3 ine 360º kurira, iyo inovimbisa kuti icharira seyakasimba uye yakangonaka pese patinoisa.
Iyo Bhatani Bhatani uye chiteshi chechaji
Isu tinotanga neiyi huru yekushandisa, tinorangarira kuti panguva ino Ekupedzisira Nzeve dzakapa chishandiso chayo nerudzi rwe "connector" kumashure iyo ichatibvumidza kuti titore nzvimbo yekuchaja, ichi chakanyatsonaka kune izvo zvatakambotaura, kuva inokwanisa kushandisa iyo BOOM 3 zvakare munzvimbo yakavharwa senge hofisi uye nekungotora kubva kune yayo yekuchaja base uye kukwanisa kunakidzwa nayo kunze, izvi zvinonakidza kwazvo. Iyi chena charger inonzi Simba UP uye isu tinongofanirwa kuisa chishandiso pamusoro, Pasina kuchaja isina waya, ichaichengeta yakanamatira zvakadzivirika ichidzivirira kutsvedza uye ichagara ichiramba yakagadzirira kumhanya. Tinogona kushandisa mutauri painenge iri pachigadziko, asi unogona kusada mutengo zvakanyanya, kwakakomberedza makumi mana nemakumi mana ema euro akatengwa kubva pawebhusaiti yavo.
Iyo Bhatani Bhatani inzira iyo Logitech inotarisira kuti isu tibatane nemumhanzi wedu, inokutendera iwe kudzora Apple Music uye Deezer Premium kuburikidza nechavo application uye sarudza ayo ari echinyakare makwara kana akazara mazita atinotonga kuburikidza neiyi bhatani. Kunyangwe paine zvimwe zvine hunyanzvi padanho rekambani, kutendeseka, kuomarara kwekushandisa uye kushandisa Ultimate Ears application yasarudza kuenderera mberi ichiridza mimhanzi mune yechinyakare nzira uye kugadzirisa zvemukati kubva mbozhanhare.
Mutengo wepamusoro wechaji yekuchaja
Shandisa microUSB tambo
Senguva dzose, tinotanga nezvatakada zvishoma. Pakutanga ndinofanira kudzokera kunodhonza nzeve dzefemu kuti ndirambe ndichishandisa microUSBHongu, ndinoziva kuti ndiyo yakanyanya kuenzaniswa uye izvo isu tese tinazvo kunze uko, asi kana tikasatora danho rakananga kuUSB-C tinozononoka zvisina basa. Uye haina kupedza kundikurudzira kuti chishongedzo chakasarudzika senge Power UP chiteshi iyo inogona kupa yechipiri kushandiswa kune iyo BOOM 3 inodhura ingangoita hafu yeiyo mudziyo, muchokwadi ini ndinofunga vanofanirwa kuisanganisira neyechishandiso.
Zvishandiso, dhizaini uye kusagadzikana kweizvozvo
Simba uye nemhando yezwi rako re360º
Kubatana uye nyore kushandisa
Kamwe zvakare neEkupedzisira Nzeve ndinofanira kutaura kuti izvo zvandaifarira zvakanyanya zvaive chaizvo hukuru hwekunzwika kwahunopa, zvine simba uye zvakajeka. Kune chikamu chayo, mutauri ari zvakare asingagadzike uye izvo zvinoongwa kunze, uko kwaunozoita nekureruka kwakanyanya. Dhizaini yacho yagadziriswa uye zvirinani, kubva mumaonero angu budiriro yakazara uye boom izvozvi hazvibude mune chero mamiriro.
Zvirokwazvo BOOM 3 ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa dzatinogona kuwana mukati mechikamu chayo, kwete kutaura zvakanakisa. Tine 360º kurira pamwe neinoshamisa simba rehukuru hwayo, kuramba kunoita kuti titende kuti kuityora hazviite uye dhizaini inopa kutenda kwakanaka kwehunhu hwayo. Izvo zvinhu hazvipikisane uye saka nezvose zvese. Iyo BOOM 3 yave yekutenga kutenderera kune avo vari pachena nezve izvo zvavanoda uye zvavari kutsvaga, ehe, uchafanirwa kuenda kunotora kuti utore chigadzirwa chehunhu uhwu, uye ndizvo MuAmazon unogona kuiwana kubva pa118,15 euros. Iwo mutengo wepamusoro, isu tatoziva kuti, kunyanya kana pasipo zvinopihwa zvinotangwa zvinosvika kuma150 euros, asi chokwadi ndechekuti kana iwe uchitsvaga mutauri ane hunhu izvi ndizvo zvinongedzo uye isu tinogona kutaura kuti mamwe ese anongomiririra Hazvisi zvakaoma kwandiri kuti ndibvume kuti BOOM 3 inogona kunge iri mudziyo wakanakisa muchikamu chayo, uyezve, izvi mhando yezvigadzirwa zvine mutengo. Imhaka yeizvozvo Ini handina imwe sarudzo kunze kwekurudzira BOOM 3 kana izvo zvauri kutsvaga chiri chipikisi mutauri, ine kuzvitonga kukuru uye pasina kupokana nehukuru hweruzha hunhu izvo vamwe vasiri kuzokupa iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Yekupedzisira Nzeve BOOM 3, iyo-yevhu-mutauri mutauri uye ese mhando
Dzakanakisa dzimwe nzira dzeDiskokosmiko
Ungashandura sei Vhidhiyo kuGIF